Calaamadaha astaanta dharka qaaliga ah | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | 07/05/2022 23:00 | La cusbooneysiiyay 10/05/2022 18:30 | logos
Noocyada dharka aadka u sarreeya ma naqshadeeyaan oo kaliya alaabooyinka, waxay isu naqshadeeyaan sidii calaamad. Aqoonsiga muuqaalka ee shirkadda noocan oo kale ah ayaa lagama maarmaan u ah horumarinteeda, joogtaynta iyo dib u soo celinta suuqa. Calaamadaha astaanta dharka raaxada ayaa saameyn weyn ku leh noocyada kale ee yaryar.
Noocyada moodooyinka ugu saamaynta badan adduunka oo dhan waxay awoodeen inay dejiyaan isbeddellada iyo sidoo kale hab-raacyada qaab-dhismeedka marka la eego naqshadaynta calaamadahooda. Inta badan aqoonsigooda summada waxay u taagan yihiin fududaantooda iyo nadaafaddooda. Daabacaaddan waxaan kuugu soo qaadanaynaa qaar ka mid ah astaanta astaanta dharka raaxada ugu fiican.
noocyada qaar, waxay awoodeen inay la qabsadaan taariikhda oo dhan, kobcinta ma aha oo kaliya alaabteeda, laakiin sidoo kale muuqaalkeeda astaanta si aad u jilicsan. Taasna waxay ku muujinayaan in nashqadohooda la ilaaliyo taariikhda oo dhan.
1 Calaamadaha Calaamadaha Dharka Raaxada ugu Fiican
Calaamadaha Calaamadaha Dharka Raaxada ugu Fiican
Aqoonsiga muuqaalku waa mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan ee lagu isticmaalo guusha iyo aqoonsiga shirkad kasta.
Mid kasta calaamadda la sameeyay, waa in ay noqotaa mid gaar ah marka lagu daro in la aqoonsan karo ogowna sidaad iskaga sooci karto tartamayaashaada. Iyadoo ku xiran mid kasta oo ka mid ah noocyada, calaamadda waxaa loo qaabeeyey ujeedooyin gaar ah oo matalaya falsafada iyo shakhsiyadda astaanta.
Qaybtan, waxaan uga hadli doonaa qaar ka mid ah calaamadaha caanka ah ee ugu wanaagsan adduunka oo dhan.
Shirkadda dharka ee caanka ka ah adduunka oo ay ugu mahadcelinayso cadarkeeda caanka ah iyo nashqada agabka gaarka ah ee ay leedahay. Summada astaantan qaaliga ah ururiya qaab casri ah iyo sidoo kale minimalist.
Waqti ka dib, astaanta wuxuu awooday inuu la qabsado isbedelada waxayna muujisay in aqoonsiga sumadda fudud uu si sax ah u shaqeeyo, isagoo noqday mid ka mid ah calaamadaha ugu caansan ee bulshadu aqoonsan tahay.
astaanta astaanta raaxada waa laba xaraf C ayaa si aad ah isugu xidhan muujinta isbeddellada naqshadaynta casriga ah. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah calaamadaha hormoodka ah marka loo eego isticmaalka noocaan naqshadeynta isku dhafan.
Su aqoonsiga summadadu waa mid aad u fudud iyo sidoo kale shakhsi ahaaneed, maadaama sida aan ku arki karno sawirka waxay isticmaashaa magaca astaanta si ay u abuurto calaamadeeda. Nooca serif-ka ee madow ee asalka cad waa sharad badbaado leh oo haddii sidoo kale lagu daro shaqo taxadar leh oo shakhsi ahaaneed, waxay gaartaa heer kale.
El Magaca astaantani wuxuu ka yimid aasaasaha taariikhiga ah, Christian Dior.. Mid ka mid ah naqshadeeyayaasha ugu saameynta badan adduunka moodada iyo abuuraha mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee raaxada ee taariikhda.
Sida kiiska Chanel, calaamadda tan Astaanta sare ee talyaaniga waxay ku salaysan tahay naqshadeeyayaasha, Stefano Gabbana iyo Domenico Dolce. Markii hore, kaliya waxay bilaabeen inay naqshadeeyaan dharka, laakiin waxay balaadhinayeen noocyo kala duwan oo alaab ah, kala duwanaanshiyaha dalabkooda iyagoo abuuraya agabka nooc kasta ah iyo cadarka.
Bilawga magacyadii aasaase kasta waa kuwa ka kooban astaanta astaanta. Labadan xaraf D iyo G, widget gaar ah ayaa la sameeyay taas oo tilmaamaysa mid kasta oo qaybteeda ka mid ah.
Waa mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee u adkeystay imtixaanka waqtiga Waad ku mahadsan tahay shaqadaada oo la daabacay. Waxay abuureen astaanta astaanta ah oo midaysa xoog iyo xarrago.
Dharka Haute couture waa waxa aad ka heli doonto magaca astaantan oo uu naqshadeeyay Karl Lagerfeld. Astaanta gurigan quruxda badan ee Talyaanigu waa dhammaan noocyada kala duwan ee dhagaystayaashu u aqoonsan yihiin calaamadda ay ku jirto labanlaab F.
Horraantii 1960-aadkii, astaantan astaanta u ah ee loo yaqaanno Zucca-ga rogan waxa sameeyay Lagerfeld. Bari icon waxaa dhiirigeliyay shirkii ugu horeeyay ee naqshadeeyaha uu la yeesho walaalaha Fendi, oo isaga ka dhigay agaasimaha farshaxanka ee astaanta.
Sannado ka dib, astaantan lama isticmaalin, dadkuna waxay iska dhigeen moodada calaamado leh iyagoo bilaabay in loo tixgeliyo dharka dhadhanka xun. Tani waxay keentay in guriga moodada uu ka tago monogramka iyo Tag calaamadda qoraalka.
2013, tani Logo ayaa dib u cusboonaysiin lagu sameeyay halkaas oo jidadkeeda la soo koobay oo ku daray goobta shirkadu ka soo baxday, Rome.
Mid ka mid ah calaamadaha leh astaanta oo sidoo kale ku biiraya qaabka ugu yar ee aan ku aragnay kiisas hore. Prada waa 3 in 1, mid kasta oo ka mid ah fashion, shirkadda iyo brand ku hawlan horumarinta, wax-soo-saarka iyo iibinta badeecadaha kala duwan.
El qaabka ugu badan ee lagu garto astaanta astaantani waa hab-qoraalka, oo ay ku jiraan laba waddo oo kala duwan; mid dhumuc weyn leh iyo mid dhuuban. Xarafkiisa R, sifo sifo ah ayaa lagu arki karaa bilowga dabadiisa. Marka laga soo tago dabeecadan, xarafka A waxaa loo qaabeeyey qaab gaar ah oo xagga sare ah.
Summada raaxada, tagtay wax ka beddelka astaantooda ku salaysan ururinta ay la shaqaynayeen, taas oo ah, bacaha ay alaabtoodu ku jiraan, iyadoo ku xiran ololaha, calaamadda daabacaadda ayaa si fudud loo isticmaalay, ama marar kale oo ah calaamadda saddex-xagalka ah.
Shirkad Faransiis ah iyo guri fashion ah oo ku yaala Paris, oo ku takhasusay naqshadaynta, horumarinta iyo soo saarista bacaha, dharka, cadarka, saacadaha, iwm. Astaanta astaanta astaantaadu waa caddahay, waxaa loola jeedaa asalka astaanta, marka lagu daro isku xirka qalabyada la bedeli karo ee ay ku soo sammeeyeen kuraasta iyo sariiraha.
Astaanta astaanta ayaa ka kooban a gaadhi faras ah oo ay ka mid yihiin suunadaha oo ay weheliyaan sawirka qof fuushan oo ku lebbisan dabo koofiyad iyo kabo leh. Sawirkaani wuxuu raadinayaa inuu xoogga saaro xiriirka iyo midnimada maqaarka.
Magaca astaanta waxaa loogu talagalay a Qoraal xagal ah oo leh serifs aad u xoog badan. Qoraalka Paris, nooca sans-serif ayaa loo adeegsaday qaab aad u nadiif ah oo qurux badan.
Sida aan ku soo aragnay tusaalooyinkan, mid kasta oo ka mid ah calaamaduhu waa mid gaar ah, waxaa laga yaabaa in ay wadaagaan sifooyinka naqshadeynta, laakiin si gaar ah waxay u muujinayaan cidda ay yihiin calaamad ahaan.
Qaybahaan naqshadeynta naqshadeynta kaliya ma muujinayaan qaabka quruxda badan iyo raaxada leh ee dhammaan noocyadan, laakiin sidoo kale waxay caawiyaan macaamiisha inay xusuustaan ​​astaanta heer muuqaal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » astaanta astaanta dharka raaxada